किन बढ्दो छ कडकनाथ कुखुराको माग ? अण्डा र रगत पनि कालै ! | Public 24Khabar
Home Health किन बढ्दो छ कडकनाथ कुखुराको माग ? अण्डा र रगत पनि कालै...
मध्यप्रदेशको भोपालमा सरकारले चिकन पार्लर खोलेको छ । जहाँ कडकनाथ कुखुराको मासु उपलब्ध हुन्छ । भारतको मध्यप्रदेशको आदिवासी क्षेत्रमा मात्र पाइने कडकनाथ कुखुराको मासु अहिले संसारभर माग छ । मध्यप्रदेशका आदिवासी युवालाई रोजगारी दिन र शुद्ध मासु आम उपभोक्ता तथा विश्व बजारमा पुर्याउनका लागि सरकारले आफै पहल लिएको हो । सरकारी पार्लरमा शुद्ध मासु र अण्डा पाइने भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन् ।
कडकनाथ कुखुराको माग विश्व बजारमा ह्वात्तै हुनुकोपछि यसको मासुमा पाइने तत्व नै हो । कडकनाथमा प्रोटिन २४ प्रतिशत पाइन्छ भने अन्य कुखुराको मासुमा जम्मा १८ प्रतिशत पाइन्छ । फ्याट कडकनाथमा धेरैमा २ दशमलब ६ प्रतिशत पाइन्छ भने अन्यमा २५ प्रतिशतसम्म पाइन्छ । कोलेष्ट्रोल पनि अत्यन्तै कम भएकाले यो कुखुराको मासु विश्व बजारमा माग आएको सरकारले जनाएको छ ।
Previous articleबाहिरियो विजय शाहिको गोप्य भिडियो ।। झाँक्रि बसे जस्तो यो के गरेको ?
Next articleअझै भेटिएन छोराको ल।स खोलाको किनारमा बाबुको बास कठै जिन्दगि